Soo dejisan Macrium Reflect 7.2.4808 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaMacrium Reflect
Bogga rasmiga ah: Macrium Reflect
Macruuf Macruuf – waa barnaamij isku dhafan si loo abuuro nuqul. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nuqul ka qaadato dhammaan xogta diskka ama qaybaha kala duwan ee muuqaalka file kaas oo loo isticmaali karo in lagu soo celiyo dhammaan xogta lumay. Macruuf Macruufku wuxuu falanqeynayaa qaybta khaladaadka ka hor inta aan la sameeyn image image. Nidaamku wuxuu kaydin karaa sawirada faylasha ee kaararka laga saari karo, CD / DVD iyo nashaadyada deegaanka ama netka. Macruum Reflect wuxuu soo jeedinayaa inuu doorto nooca cadaadiska oo lagu rakibo goobaha dheeraadka ah ee cabbirka iyo heerka rikoodhada. Sidoo kale Macrium Reflect wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho xogta lagama maarmaanka ah ee sawirka adigoo rakibaya sawir ahaan sida disk digitet ah oo lagu arki karo Windows Explorer.
Dhamaystirid dhan disk ama faylal gaar ah
Heerka sare ee riixitaanka iyo duubista
Ku keydinta sawirada DVD, daroogooyinka laga saari karo iyo nuqulada deegaanka
Jadwalka xog-ururinta xogta-ku-sameynta
Tijaabinta waxyaabaha ku jira nuqulta Windows Explorer
Soo dejisan Macrium Reflect
Faallo ku saabsan Macrium Reflect
Macrium Reflect Xirfadaha la xiriira